I-Google Pixel 3 yaba yeyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso ngekhamera enye ngokweDxOMark | I-Androidsis
I-Google Pixel 3 yaba yeyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso ngekhamera enye ngokweDxOMark
Xa sithetha nge-DxOMark, uninzi lwabavelisi abaphenduka isisu, kuba kwiimeko ezininzi, okoko bengayifumani imali evela kumenzi (iHuawei), amanqaku akude kunoko abathembisi bakuthembisayo xa bethengisa iifowuni zabo. I-Apple ihlala ihlala iyeyona ndawo imbi kakhulu ngokwamanqaku, ke ihlala ikhanyela.
Kodwa kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, lo mzimba uqinisekisile ukuba i-iPhone XR yayiyeyona smartphone ibalaseleyo inekhamera enye ngokweemvavanyo zayo, ifumana amanqaku ayi-101. Ukonwaba kwamakhwenkwe eCupertino kuhleli kancinci, okoko le nkampani Ndisandula ukubhengeza inqaku likaGoogle Pixel 3: 101. Iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi.
Nangona kunjalo, ngelixa i-iPhone XR ifumana amanqaku ali-103 ekufotheni kwaye i-96 ikwividiyo, amanqaku e-Google Pixel afumana amanqaku ali-103 ekufotheni nasekufeni okungama-98 kwividiyo, sinokuthi ngaphandle kokufumana umsebenzi ofanayo, iGoogle Pixel 3 ingaphezulu kancinane kwi-iPhone XR.
Lo mzimba uthathela ingqalelo amandla anikezelwa sisiphelo sendlela ngokusebenzisa isoftware, ngaphandle kokuhlalutya ukuphuculwa okunokufumaneka kamva kwisoftware apho iPixel 3 ingcali, Imowudi yasebusuku yenye yezona zinto zinomtsalane esinikwa sesi sizukulwana sesi-3.
Ngokuqinisekileyo uvile okuninzi malunga nemowudi yasebusuku yeGoogle Pixel 3, imowudi ebonisa ukukhanya apho kungekho kukhanya kukhanyisa iifoto. Ukuba le nkampani ibithathe eli nqaku, kunokwenzeka ukuba iGoogle Pixel 3, andithethi ngemodeli yeXL, ngewafumene awona manqaku aphezulu, imi kufutshane kakhulu netheminali ngeekhamera ezimbini.
Inqanaba le-DoXMark yee-smartphones ezimbini zelensi ikhokelwa yiHuawei Mate 20 Pro, ilandelwe yi-iPhone XS Max, i-HTC U12 +, i-Galaxy Noe 9 kunye neXiaomi Mi MIX 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Google Pixel 3 yaba yeyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso ngekhamera enye ngokweDxOMark
Ngaba oku kuya kuba kuyilo lweHuawei P30 Pro?
INova Launcher Prime ifumaneka kwi-euro ezi-0,59 kuphela